Unai Emery Oo Ka Warbixiyay Amaan Daradii Budhcadnimo Ee Mesut Ozil & Sead Kolasinac Soo Wajahday-Miyay Kulanka Burley Diyaar Yihiin? - Gool24.Net
Unai Emery Oo Ka Warbixiyay Amaan Daradii Budhcadnimo Ee Mesut Ozil & Sead Kolasinac Soo Wajahday-Miyay Kulanka Burley Diyaar Yihiin?
Tababaraha kooxda Arsenal ee Unai Emery ayaa ka war bixiyay sida ay noqotay xaaladii amaan daro ee xidigaha kooxdiisa ee Mesut Ozil iyo Sead Kolasinac sababta ugu noqotay in ay seegeen kulankii furitaanka Premier League ee Newcastle United.
Unai Emery ayaa cadeeyay in Mesut Ozil iyo Sead Kolasinac ay diyaar buuxa u yihiin kulanka muhiimka ah ee ay Reds la ciyaari doonto kooxda Burnley.
Budhcad mindiyo ku hubaysan ayaa isku dayay in ay waxyeelo u gaysteen Mesut Ozil iyo Sead Kolasinac taas oo keentay in booliisku ay baadhitaano sameeyaan, laakiin labadan xidig ayaa loogu han jabay in dhibaato la soo gaadhsiin doono isla markaana la dhici doono hantidooda oo dhan.
Markii Unai Emery wax laga waydiiyay haddii Mesut Ozil iyo Sead Kolasinac ay maskax ahaan taam u yihiin in ay kulanka Burley ciyaaraan ayuu ku jawaabay: “Boqolkiiba boqol. Waxaanu filaynaa in ay maskaxdoodu fiican tahay isla markaana ay diiradoodu anaga nala jirto”.
“Diiradaydu waa in ay wanaag noqoto, waxaanan doonayaa in aan iyaga ka caawiyo sidii ay caadi ugu noolaan lahaayeen. Taladaadadii ayay tababarka noogu soo laabteen, fasax ayaanu ahayn laakiin iyagu tababarka ayay ku soo laabteen” ayuu Emery hadalkiisa sii raaciyay.
Emery ayaa sheegay in Ozil uu shalay xanuun ku seegay tababarka wuxuuna yidhi: “Mesut shalay muu tababaran oo wuu xanuunsanayay, laakiin maanta wuu tababartay. Labaduba waa doorashooyin fiican, go’aanka ayaan qaadan doonaa haddii sabtida ay nala joogi doonaan, barri ayaan sugi doonaa”.
“Anigu waxaan ku faraxsanahay in ay soo laabteen iyagu, qaabkayaga ayaanu ciyaartoyda oo dhan ugula sii wadan doonaa, marka ay si joogto ah u tababaranayaan, war fiican ayay noo tahay, sabbatoo ah way na caawin karaan” ayuu Emery sharaxaadiisa raaciyay.
Unai Emery ayaa sheegay in soo laabashada Ozil iyo Kolasinac ay wax fiican u tahay isla markaana ay kooxdu amaankooda ka caawinayso wuxuuna yidhi: “Wanaag ayay tahay in ay nala joogaan. Kooxdu waxay ka shaqaynaysaa sidii iyaga looga caawin lahaa amaankooda. Anigu waxaan ka caawinayaa in ay tababarka iyo diyaar garowga diirada saaraan”.
“Waqti xaadirkan way degan yihiin isla markaana kooxdu iyaga ayay la shaqaynaysaa”. ayuu Unai Emery hadalkiisa ku soo xidhay.